VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY : Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc
Raha tsy misy ny fiovana dia ny fiandohan’ny volana jolay ho avy izao no hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey lasa teo ny Hcc. 11 juin 2019
Mialohan’io daty io, ireo endrika tsindry rehetra na mivantana na ankolaka atao amin’ireo mpikamban’ny Hcc dia voararan’ny lalàna fa tsy azo atao.
Mizotra amin’ny antsakany sy andavany ny fikirakirana ny voka-pifidianana solombavambahoaka.
Ny herinandro lasa teo iny no tonga teny amin’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ireo fitanana an-tsoratra tena izy avy eo anivon’ireo birao fandatsaham-bato. Hatramin’ny omaly dia voka-pifidianana amina Distrika miisa 108 manerana ny nosy no efa vita kirakira tanteraka. Amin’ny sabotsy ho avy izao, araka ny tetiandro voafaritra no tokony hamoahan’ny Céni ny vokatra vonjimaika feno niainga avy tamin’ireo fitanana an-tsoratra orizinaly ireo.
Ao aorian’izay dia alefa eny anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana io vokatra vonjimaika io. Ity farany no nomen’ny lalàna fahefana hamoaka ny vokatra tena ofisialy sy handamina ireo disadisa rehetra misy mahakasika ny fifidianana. Manoloana izany dia voararan’ny lalàna ny fifampikasohana mivantana amin’ny Filohan’ny Hcc sy amin’ireo mpikambana rehetra eo anivon’ity andrim-panjakana ity. Izany dia hisorohana ny mety hisian’ny tsindry na amin’ny endriny mivantana izany na ankolaka mandritra ny fotoana hikirakiran’izy ireo ny voka-pifidianana tena ofisialy.
Mialohan’ny daty voatondro fa hamoahan’ny Hcc ny voka-pifidianana ofisialy dia mikatona tanteraka ho an’ireo kandidà sy ny solonteny na ihany koa ireo mpanohana kandidà ny varavaran’ny Hcc. Tsy afaka mandray na manao fihaonana amin’ireto farany ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Izany dia voafaritra mazava ao anatin’ny lalàna velona hialana amin’ny mety hisian’ny tsindry sy faneriterena ankolaka amin’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Manana fe-potoana kosa ireo kandidà sy ny olom-pirenena tsy ankanavaka hametrahana fitoriana eny amin’ny Hcc aorian’ny hamoahan’ny Céni ny vokatra vonjimaika feno.
Misy ny sori-dalana arahina amin’ny fomba fitoriana, tafiditra ao anatin’izany ny tsy maintsy hisian’ny porofo mazava ampiarahina amin’ilay fitoriana. Mialohan’ny hamoahana ny vokatra ofisialy no handinihan’ireo mpikamban’ny Hcc izany ary amin’ny fotoana hamoahana ny valim-pifidianana raikitra ihany koa no hanambaran’izy ireo ny fanapahan-kevitra rehetra mahakasika ireo fitoriana.